FBC - Namoonni 13 daldala kontirobaandii irratti hirmaataa turan too’annoo jala oolfaman
Namoonni 13 daldala kontirobaandii irratti hirmaataa turan too’annoo jala oolfaman
Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Namoota haala gurmaa’een daldala kontirobaandii irratti hirmaataa turan 13 mootummaan too’annoo jala oolchuusaa ministirri Hogganaa Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Obbo Ahmad Shidee ibsan.
Ministirri muummee Doktar Abiy Ahmad wayita muudama isaaniitti haasaa dhageessisaniin nagaa fi tokkumma uummataa mirkaneessuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waadaa seenaniiru.
Sirna daldala galii fi ba’ii kontirobaandii irraa bilisa gochuun hidhata kontirobaandii diiguun ammoo hojii kana keessaa isa tokkodha.
Kanaafis Abbaan-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaa qorannoo geggeesse irratti hundaa’uun jalqaba hoggantoonni kellaawwanii fi buufataalee too’annoo itti-gaafatamummaa irratti ramadamanii jiranii akka gadhiisan taasifamuu ministirichi Obbo Ahmad Shidee himaniiru. Hojjattoota damichaa sadarkaa isaanii sirreessuunis raawwatamuu eeraniiru. Itti-aansuunis namoota daldala kontirobaandii irratti bobba’an fi hidhata isaa too’annoo jala oolchuuf duulli ba’amee namoonni 13fi meeshaaleen too’annoo jala oolfamuusaanii ibsaniiru.
Fuul-duraafis iddoowwan daldalli kontirobaandii jiruu fi oomishaalee daldala alaa miidhan kontirobaandiif saaxilaman irratti xiyyeeffannoon kennamee akka hojjatamu eeraniiru.
Beelladni, bunnii fi midhaan gara-garaa kontirobaandiif guddaa saaxilamuusaanii kan eeran Obbo Ahmad Shidee, oomishaalee kanneen kontirobaandii irraa ittisuun dinagdee biyyattii tasgabbaa’aa gochuun, guddina biyyattii itti-fufsiisuun tarkaanfii murteessaa ta’a jedhaniiru.
Kana malees, ministirichi akka jedhanitti namootaa fi dhaabbata seera da’achuun shamarran fi dhiirota dargaggoo viisaa tuuristiin gara biyyoota Arabaa gara-garaatti ergaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuu himaniiru.
Mootummaan mirgaa fi nageenya lammilee eegsisuuf, ministirri muummee daawwannaa imalaniin lammileen biyyoota gara-garaa keessatti too’annoo jala jiran hidhaadhaa akka gadhiifaman gochaa wayita jiranitti lammilee bu’aa ba’iif kan saaxilan namootni kunneen too’annoo jala akka oolfaman taasifamuu ibsaniiru.
Namootaa fi dhaabbilee gocha kana fakkaatu dalagan irratti qorannoo bu’uureffachuun tarkaanfiiwwan wal-fakkaataa fudhatamu cimee itti-fufa jedhaniiru.
Mootummaan mirgaa fi kabajaan lammilee akka eegamuuf hojilee hojjatu malee, maatiin ijoolleesaa hojiif wayita ergu karaa seera-qabeessa qofa hordofuu qaba jedhaniiru.
Kanaafis mootummaan yero yeroon biyyoota gara-garaa waliigaltee bobbii hojii seera-qabeessa walii mallatteesse beeksisuu isaa akka itti-fufu ibsaniiru.
Namoonni kontirobaandiinis ta’e daddabarsa namootaa seeraan-alaan shakkamanii too’annoo jala oolfaman kunniinis maqaan isaanii fuul-duratti akka beeksifamu himaniiru.
Dhimmi isaaniis qoratamee mana-murtiitti dhihaate furmaata akka argatu ministirichi Obbo Ahmad Shidee ibsaniiru.
Oduuwwan Biroo « Muummee ministiraa Dr. Abiy hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf Ramadaanni kan tokkummaa fi jaalalaa akka ta’u hawwan	Soomni Ramadaanaa bor jalqabama »